Ogaden News Agency (ONA) – Maalinwalba waxaa laga soo saaraa TV-ga Ciidankiinii oo soo qulqulaya !!
Maalinwalba waxaa laga soo saaraa TV-ga Ciidankiinii oo soo qulqulaya !!
Nin aan saaxiiba nahay ayaa teleefoon ii soo diray isagoo ii muujinaya inuu ka murugaysan yahay waxyaabaha uu daawaday. Wuxuu igu bilaabay isla markiiba; “Arintan waa inaad wax ka qabataan”.
Maxaa soo kordhaya ayaan weydiiyay.
Jawaabtiisii waxay noqotay; “Waxaan daawaday TV Jigjiga, wuxuu soo saarayaa maalinwalba qaar ka mid ah ciidankiinii oo sia soo dhiibay iyagoo hubkoodii wata oo la wareysanayo. Sidan hadday ku sii socoto halaganka aad wadaan wuu istaagi”.
Waxaan aad ula yaabay xamaasadda ka muuqata iyo walwalka uu ka qabo inuu halganka socda hagaaso oo guulaysan waayo. Waxaan si tartiib ah u weydiiyay; Xageed ka daawatay?
Wuxuu ku jawaabay; TV-ga Cabdi iley ee Jigjiga.
Waxaan ku idhi; Ma waxaan sidaa ahayn ayaad ka filaysay inay ka sheegaan ONLF iyo naftood-hurayaasha?
Intuu yarehe aamusay ayuu si ku margasha ah u yidhi;
“Oo ma been intaa la’eg ayay sheegayaan.”
Waa runtii oo shacabkeena uma baranin in been intaa la’eg loo sheego oo waliba laga sii daayo codbaahiye caam ah oo lawada dhagaysanayo. Taasoo jirta ayaanay ogsoonayn in Itobiya ay dacaayadda ka dhigatay hub ay kula dagaalanto shacabkeena iyo halgankiisa.
Hadaan u soo noqono qodobkan, tan iyo markii TV-ga af-somaaliga ah ay Itobiya ka furatay Jigjiga, waxaa si joogta looga soo daynayay kolba raxan dhalinyara ah oo la leeyahay waxay ka soo goosteen ciidanka jabhadda oo waa isa-soo dhiibeen. Ama qof leh waxaan ahaa masuulka jaaliyada dalkaa oo waan soo ghalay. Ama dad la leeyahay waxay ahayeen dhalainyaradii lagu soo qabtay dagaalada oo la cafiyay kuna biiray maleesiyadda Cabdi iley. Ama habro iyo odayaal qaarkood ilma iska tirayaan oo leh waxaa nalaayay ONLF. Ama .. ama .. Arimahaasoo idil waxay ka mid yihiin sababaha ay Itobiya u maalgalisay TV-gan. In lagula dagaalamo halganka oo ku soo celcelinta dacaayadahaa ay ka dhalato in la rumaysto, sida saaxiibkay uu ii weydiiyay.
Waxaan u sheegay saaxiibkay arinta meesha ka jirta iyo siyaabaha loo samaynayo dacaayaddaa iyo dadka loogu talagalay in lagu niyad jabiyo. Inta ugu badan dhalinyaradaa waxaa laga soo qabqabtaa geelooda iyagoo la jooga ama falanaya beerahooda. Ka dibna meel ayaa lagu xareeyaa xabsi ahaan, waxaana lagu eedeeyaa inay yihiin ONLF la soo qabqabtay. Muddo markii meeshaa lagu hayo oo la rafaadiyo oo qaarkood ay timaha u baxaan ayaa loo sheegaa in la sii daynayo haday qirtaan inay ahaayeen ONLF isa soo dhiibay oo ka soo baxsaday ciidankay ka tirsanaayeen. Markay ogolaadaan, hadii kale waxaa loo dhaadhicin Jeel Ogadeen, ayaa la qabadsiini waxay odhan lahaayeen oo ah ciidanka uu ka tirsanaa, taliyahiisa midkuu ahaa, meelaha uu ka dagaalamay. Intaasoo idil waa si loo rumaysto inuu ka mid ahaa ciidmada ONLF ee aagaa jooga maadaama la yaqaano. Ka dib, waxaa ku xigta in la yidhaahdo ka sheekee dhibaatada aad u gaysan jirteen shacabka, oo sidii loogu sheegay uu u akhriyo. Qaarkoodna waxaa loo adeegsadaa inay farta ku fiiqaan reeraha uu Cabdi iley rabo ama Shaaliqaha goobtaa uu rabo in xabsiyada laga buuxiyo.
Marmar way dhacdaa inay qabtaan N/hure meel waajibaad looga diray ama dhaawacmay. Waase fara ku tiris. Sababtoo ah hadday siday u sheegayaan jirto, ONLF dagaalamaysaaba ma jirtee maxaa dadka shacabka ah loo dhibaa oo xabsiyada looga buuxiyay.
Saaxiibkay intaa markaan u sheegay iyo jawaaba kale oo la xidhiidha isagoo qanacsan ayaan teleefoonka kala dhignay oo dhaar ku maray inuusan dib dambe u daawanin TV-ga Itobiya uga samaysay Cabdi iley magaalada Jigjiga.